प्रस, वीरगंज, २२ फागुन/
माउन्ट एडमन्ड माध्यमिक विद्यालयले लक्ष्य निर्धारण कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनन्तकुमारलाल दास प्रमुख प्रशिक्षक रहेको सो कार्यक्रममा उनले भने– “सपना भनेको कल्पना मात्र हो र लक्ष्य भनेको योजनासहितको सपना हो। लक्ष्यबेगरको मानिस भनेको आत्माबेगरको मानिस हो। यदि लक्ष्य स्मार्ट भएन भने त्यो कहिल्यै पूरा हुँदैन र अहिलेका विद्यार्थीहरूले गोलपोस्टबेगर फूटबल खेलिरहेका हुनाले यो गोष्ठी विद्यार्थीहरूका लागि लाभदायक छ।”
यसैगरी, सहायक प्रशिक्षिका सुनिधि दासले यदि समस्यामाथि जोड दिइयो भने लक्ष्य ओझेलमा पर्छ र लक्ष्यमाथि जोड दिइयो भने समस्या ओझेलमा पर्छ भन्दै चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरियो भने लक्ष्य हासिल गर्न रमाइलो हुने बताइन्।
कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरू समावेश भएको सो कार्यशाला गोष्ठीमा लक्ष्य भनेको के हो ? यो किन आवश्यक छ ? लक्ष्य कस्तो हुनुपर्छ ? लक्ष्यलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरेर तयार गर्नुपर्छ ? लक्ष्यलाई कसरी स्मार्ट बनाउने ? लक्ष्य किन असफल हुन्छ ? स्वोट (क्ध्इत्) विश्लेषण कसरी गर्ने ? यसका के के फाइदाहरू छन् ? जस्ता विषयहरूको ज्ञानसहित अभ्यास र प्रदर्शनसमेत गराइएको थियो।
कार्यक्रमको समापनमा कक्षा ८ की हिमानी यादवले भनिन्– “बल्ल थाहा पाइयो, लक्ष्यमाथि ध्यान दिंदा समस्या नै देखा पर्दैन।” त्यस्तै लिजा श्रेष्ठले स्वोट विश्लेषणले हामीभित्र रहेको ताकत र कमजोरी तथा बाह्यरूपमा त्यसबाट हुने फाइदा र डरलाई हटाउन सहज हुने बताइन्। यसैगरी, राहुल यादव र हुलास गुप्ताले आगामी दिनमा हामी सबै विद्यार्थी स्मार्ट बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।